Madaxda Hay’adaha ammaanka oo maanta hortagaya Golaha Shacabka kulan albaabadu… – Hagaag.com
Madaxda Hay’adaha ammaanka oo maanta hortagaya Golaha Shacabka kulan albaabadu…
Posted on 14 Abriil 2019 by Admin in National // 0 Comments
Kulanka Baarlamaanka ee maanta uu ku yeelanayo xarunta Golaha Shacabka ayaa waxaa hortagaya Wasiirada qaabilsan Amniga iyo Taliyeyaasha Ciidamada, iyadoo kulankan uu yahay mid albaabada u xiran oo Warbaahinta aan loo ogoleyn.
Guddoomiye Maxamed Mursal ayaa shalay ku dhawaaqay in kulanka maanta oo Axad ah yeelanayo Baarlamaanka uu yahay mid albaabada u xiran oo aan loo ogoleyn Saxaafadda.
Mas’uuliyiinta kulanka looga yeeray ee su’aalaha lagu weydiinayo ayaa kala ah Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow, Wasiirka Gaashaandhigga Xasan Amar Dambe, Duqa Muqdisho iyo Taliyeyaasha Ciidamada oo horay Guddoonka Baarlamaanka u yeeray.
Kulankii shalay ee Baarlamaanka ayaa ahaa kii ugu waqtiga dheeraa, iyadoo Xildhibaanada si adag uga doodeen arrimaha amniga, waxaana eedeymo adag loo jeediyay Hay’adaha Amniga.
Maalmihii u dambeeyay xaalada Amniga ee magaalada Muqdisho ayaa faraha ka sii baxeysay, iyadoo qalalaase, dilal iyo qaraxyo ka dhacayeen, inkastoo Hey’adaha Ammaanka ay xireen waddooyinka muhiimka ah ee magaalada, si looga hortago qaraxyo iyo falal kale oo Amniga waxyeeleynaya.